Dowladda Kenya oo mamnuucday dibadbaxyada mucaaradka - BBC News Somali
Dowladda Kenya oo mamnuucday dibadbaxyada mucaaradka
Image caption Taageerayaasha mucaaradka ayaa dhigayay dibadbaxyo ay ku dalbanayaan isbadal.
Wasiirka arrimaha gudaha Kenya, Fred Matiang'I, ayaa sheegay in mamnuuciddaasi looga golleeyahay in lagu badbaadiyo hantida iyo shacabka Kenya.
Matiang'i ayaa sheegay in ujeeddada mamnuuciddan aysan ahayn in dadka loogu diido xaquuqdooda dastuuriga ah ee ay dibadbaxyada ku dhigi karaan balse tahay mid lagu heshiiyay kaddib markii mas'uuliyiintu ay arkeen haliska dalka ku soo wajahan.
Image caption Booliska ayaa awood u adeegsanayay in ay kala diraan dadka dibadbaxyada dhigaya.
Wasiirka ayaa shir jaraa'id ka sheegay in ay cabasho uga timid dadka gancsatada ah oo ka sheegtay saameynta xun ee ay dibadbaxyadu ku yeesheen gancsigoo
"Sidan kuma sii socon karno. Waa nasiib darro in aan aragno dadka oo gawaaridooda la burburinayo, hantida dadka oo la baabi'inayo iyada oo qiil laga dhiganayo dibadbaxyo nabdoon. Waa khasab in aan sharciga ilaalino," ayuu yiri Matiang'i.
Waxa uu sidoo kale sheegay in saraakiisha sarsare ee mucaaradka ay qaadan doonaan mas'uuliyadda rabshadihii dhacay shalay oo arbaco ahayd.